Tompom-panasana sy mpiahy io lanonam-be io ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady, ka olona manodidina 1300 no re fa hasaina ao. Tafiditra ao ireo masoivoho vahiny eto amintsika. Mandritra io fotoana io no hitarafana ny ho fandehan’ny fiainam-pirenena mandritra ny taona 2017. Nireharehan’ny fitondrana ny fahavitan’ny fihaonana iraisam-pirenena dia ny Comesa sy ny Frankôfonia ary ny fahazoana ilay volabe 10,4 miliara dolara nandritra ny fikaonan-doha tamin’ny mpamatsy vola (CBI) tany Parisy Frantsa farany teo. Lasa niala sasatra avokoa ny governemanta ho valim-pitia tamin’ireny. Etsy an-kilany ny vahoaka miaritra ny asan-jiolahy, miaina anaty haizina amin’ny delestazy, tsy mba mifety toy ny mpiasam-panjakana ny FRAM fa tsy nahazo tambinkarama ny hasarotam-piainana nefa mitombo hatrany. Ny Vahoaka efa leo ny fampiesonana lava. Inona no hambaran’ny mpitondra ? Hanao fanapenam-bava ka hampanantena fisondrotan-karama ? Eo isika mahita izy !